सञ्जीवनी बुटी नेपालमै दिन थाल्यो ट्रोफलले फल अमेरिकामा १ केजीको ५ लाखसम्म पर्छ ! के हो ट्रोफल ?
प्रकासित मिति : ६ मंसिर २०७५, बिहीबार प्रकासित समय : १४:२१
काठमाडौ मंसिर ६ । युरोपियन देशहरुमा खेती गरिदै आएको ट्रोफल नेपालमा भित्रिएको छ । यो एउटा रुख हो । यसको हाँगामा फल फल्दछ भने जमिन मुनी जरामा ढुंसी फल लाग्छ । यही जमिनमुनी लागेको ढुंसी फल नै ट्रोफल हो । यसलाई सञ्जीवनी बुटी पनि मानिन्छ । युरोप तथा अमेरिकामा १ केजीको ५ लाखसम्म पर्छ । यसको खेती चिसोहावापानी मा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा यसको खेती भने अनुसन्धानमै रहेको छ । यो विरुवालाई नेपाल भित्राउने काम भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र जनकम्युनको सहकार्यमा नेपाल भित्रीएको हो । आज भन्दा ६ वर्ष अघि नेपाल भित्रिएको यस विरुवाले अहिले फल दिन थालेको छ । यसको खेती नेपालको पहाडी भु भागमा गर्न सकिन्छ । तथापी जव यस विरुवाको उत्पादन आउछ र बजार पाउँछ अनि भने बल्ल नेपालमा खेती सम्भाब्यता बारे प्रमाणित हुन्छ ।
शुरूदेखि नै ट्रोफल वगानको रेखदेख गरिरहेका राजकुमार रोका मगर ९५९० ले अहिलेसम्मको अवस्थाले ट्रोफलको लागि रोल्पा उपयुक्त देखिएको बताए। “यहाँ सफल भयो भने चुनढुंगा भएका नेपालभरका पहाडमा यो हुन्छ भनेर बुझनुहोस्”, उनले भने। लगनशील, आशावादी र हँसमुख उनीसँगको भेटले थवाङसम्मको कठिन यात्रालाई रोचक बनाइदिन्छ। सदरमुकाम लिवाङबाट बर्खेझ्रीमा धवाङ, लाटावाङ, टुटु, मिरुलहुँदै दुई दिनमा थवाङ पुग्दासम्म कम्तीमा एक किलो जुकाले टोक्यो होला, तर राजकुमारले ठूलो आशा, धैर्य र विश्वासका साथ स्याहारिरहेको काम हेर्दा र कुरा सुन्दा यात्राको सारा कष्ट हरायो।